Biodiversity Vision - Biodiversity Extinction ZU
Ukuqothulwa kwezinto eziphilayo
I-Biodiversity isho inani nezinhlobonhlobo zezinhlobo zezinto eziphilayo esinazo emhlabeni wonke kanye nasendaweni. Lokhu kufaka phakathi izilwane, izitshalo, isikhunta, amagciwane kanye nolwelwe.
Ngenxa yezenzo zamamans lokhu kwehlukahlukana kwezinto eziphilayo kwehla ngokushesha kuwo wonke umhlaba, kakhulu kangangokuba umuntu angawubheka njengomcimbi wokuqothulwa kwesisindo. Umcimbi wokuqothulwa kwabantu owaziwa kakhulu ngesikhathi lapho ama-dinosaurs aphela. Kungashiwo ukuthi ukuhlukahluka kwezinhlobo zezinto eziphilayo ekugcineni kuzolulama ngendlela eyodwa noma kwenye njengoba nje kwenza ngemuva kokuqothulwa kwama-dinosaurs, kepha lokhu kungathatha isikhathi eside kakhulu futhi mhlawumbe kungakaze kube ngaphambi kokuba izinhlobo zomuntu uqobo ziphele.
Simele sikhulule izizukulwane zethu ezizayo ukuthi sikubeke phansi lokhu kwehla okusheshayo kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo. Izwe elingenazo izinto eziphilayo liyadina futhi lingase lisongele nobukhona bethu. Kungashiwo ukuthi i-Coronavirus Covid19 Pandemic ingumphumela wokwephulwa kwethu okwandayo kwemvelo.
Njengamanje kunokwehla okusheshayo kwezinhlobo eziningi zokuphila. I-Habitat ethatha isikhathi eside ukululama iyalahleka. Ukwehluka kwezinyoni, izinhlanzi, izimvemvane nezinye izinambuzane kuyehla ngokushesha. Kungashiwo okufanayo ngokuhlukahluka kwezitshalo nezilwane ezahlukahlukene, kubandakanya nezilwane zasekhaya kanye nezilwane ezifuywayo.
Muva nje kube nokugxilwa okukhulu ekushintsheni kwesimo sezulu. Kodwa-ke naphezu kwayo yonke inkulumo kanye nobuchwepheshe obusha obusetshenziswa ukusetshenziswa kahle ukukhiqiza amandla, ukusetshenziswa komhlaba wonke okuhlanganisiwe kaphethiloli okwenziwa nge-carbon akwehli ngakho-ke impi yethu yokulwa nokushintsha kwesimo sezulu ayiphumeleli. Isizathu salokhu ukuthi amaplanethi inani labantu liyakhula futhi ukusetshenziswa kwawo wonke umuntu kuyakhula.
Ukushintsha kwesimo sezulu kungenye yezinto ezithinta ukwehluka kwezinhlobo zezilwane. Lapho sibhekene nempi esolisayo yokushintsha kwesimo sezulu sidinga kakhulu i-Plan B noma ezinye izindlela ezingeziwe zokuvikela ukuhlukahluka kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo. Leyo yisihloko sethu.
Zikhona ezinye izinhlangano phandle ezenza umsebenzi omuhle, ezinye izimpi ziyaphumelela kepha impi yokulwa nokulahleka kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ilahlekile. Sifuna ukukushintsha lokho.
Uhlelo lwethu olukhulu
ukukhombisa kosopolitiki ukuthi abantu bafuna imiphumela yangempela futhi
ukusebenzisana nososayensi kanye nezinye izinhlangano ukubhekana nokulahleka kwendalo kwemvelo kuyo.
Ungasisiza senze umbono wethu ugcwaliseke ngokusakaza izwi. Lokho kungokwabelana ngesixhumanisi sethu nokukhuthaza abantu ukuthi bakhombise ukusekelwa kwabo ngokujoyina (noma ngabe lokho kuphela abakwenzayo) kanye / noma ngokuvolontiya kanye / noma ngokunikela.